राजधानीका २९ उच्च मावि खारेज हुँदै
देशभरका ७१ उच्च मावि खारेजी प्रक्रियामा अखबार नेपाल काठमाडौं, असार ७ । कक्षा ११ को भर्ना सुरु गर्ने तयारीमा रहेका छ दर्जन उच्च माविको सम्बन्धन आगामी साउन १
वैरो संघमा त्रिपक्षीय भिडन्त, उम्मेदवार मत माग्न व्यस्त
अखबार नेपाल काठमाडौं, असार ७ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आसन्न निर्वाचनका लागि त्रिपक्षीय भिडन्त निश्चित भएको छ । सोमबारसम्म निर्वाचनका लागि सर्वसम्मत नहुने निश्चितता बढ्दै जाँदा
प्राधिकरणमा प्रचण्डको दोहोरो भूमिका
१६ बुँदेभित्रको अलिखित सम्झौता भंग ! अखबार नेपाल काठमाडौं, असार ७ । भूकम्पपछि पुनःनिर्माण तथा पुर्नस्थापनाका लागि सरकारले गठन गर्न लागेको प्राधिकरणपछि एकीकृत नेकपा माओवादीमा पुनः विवाद सुरु
अखबार नेपाल खोटाङ, असार ७ । करेन्ट लागेर खोटाङमा एक युवकको मृत्यु भएको छ । करेन्ट लागेर नुनथला–५ का २७ वर्षीय मनकुमार राईको मृत्यु भएको हो ।
एसएलसीमा सिरहा पूर्वाञ्चलमै तेस्रो
अखबार नेपाल लहान, असार ७ । गत शुक्रबार प्रकाशित प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) मा सिरहा जिल्ला पूर्वाञ्चलमै तेस्रो भएको छ । एसएलसीको परीक्षाफलअनुसार सिरहाका ४० प्रतिशत परिक्षार्थी उत्तीर्ण
भत्केको भवनमा भर्ना सुरु गर्दै उच्च माविहरु
अखबार नेपाल काठमाडौं, असार ६ । विनाशकारी भूकम्पको सिकार भएका राजधानीका दर्जनौं माविहरुले जोखिमयुक्त भवनमा नै कक्षा ११ को भर्ना लिने तयारी गरेपछि अभिभावकहरु चिन्तित बनेका छन्
प्लेनबाटै आठ जना पक्राउ
अखबार नेपाल काठमाडौं, असार ६ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलबाट भारत जान लागेका ८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जेट एयरको उडानद्वारा भारतको नयाँदिल्ली जान लागेको अवस्थामा
न्यायको उल्लंघनः कानुन व्यवसायी
अखबार नेपाल काठमाडौं, असार ६ । सर्वोच्च अदालतले प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिका विषयमा शुक्रबार गरेको आदेशले न्यायिक संयमितता र परिधिलाई उल्लंघन गरेको कानुन
विवाद नबढाउ : राष्ट्रपति
अखबार नेपाल काठमाडौं, असार ६ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि व्यवस्थापिका संसद र न्यायपालिकाबीच उत्पन्न विवादपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम रहनुपर्नेमा
पृथ्वी लोप हुने अवस्थामा प्रवेश गर्दै
– स्टेनफोर्ड विद्यालयको निष्कर्ष : मानव जीवनको अस्तित्व संकटमा – सामान्य भन्दा ११४ गुणाले आम जीव विनासको क्रम बढ्यो – छ करोड ५० लाख बर्षपछिकै
सर्वोच्चको फैसला, संसद र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व
अखबार नेपाल काठमाडौं, असार ६ । दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउन आदेश दिएपछि संसद र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । यसको
विद्यार्थीहरुको आन्दोलन फिर्ता
५० प्रतिशत शुल्क मिनाहा अखबार नेपाल काठमाडौं, जेठ ३१ । एक महिनाको शुल्क मिनाहाको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका १३ विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
अखबार नेपाल भक्तपुर, जेठ ३१ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले २०७१ सालको प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत वर्ष जेठ ३० गते
मनसुन सुरु, यसबर्ष कम पानी पर्ने
अखबार नेपाल काठमाडौं, जेठ ३१ । नेपालमा तीन दिन ढिला गरी मनसुन सुरु भएको छ । मनसुन त्यति सक्रिय भने छैन । सामान्यतया अंग्रेजी महिनाको १० तारेखदेखि
ताप्लेजुङमा मर्नेको संख्या ३८ पुग्यो
अखबार नेपाल ताप्लेजुङ, जेठ ३१ । ताप्लेजुङ पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ३८ पुगेको छ । १८ जना घाइते भएका छन् भने २३ जना बेपत्ता भएका छन् ।
पूर्ववत अवस्थामा फर्केन राजधानी
बहुदलकाजी राई काठमाडौं, जेठ ३१ । गत बैशाख १२ गते गएको बिनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पका कारण त्रसिद सर्वसधारण अझै राजधानी फर्कन सकेका छैनन् । सर्वसधारण राजधानी
सकारात्मक सन्देश दियो सोह्र बुँदे सहमतिले
अखबार नेपाल काठमाडौ, जेठ ३१ । मुलुकको ध्यान विपद् व्यवस्थापनमा रहिरहेकै बेला संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुलाई चामत्कारिक ढङ्गले किनारा लगाउँदै राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माणबारे जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह
Date : 09 Jun 2015
चार दलले गरे मध्यरातमा सहमति, संविधान निर्माणको ढोका खुल्यो
अखबार नेपाल काठमाडौं, जेठ २५ । लामो समयदेखिको रस्साकस्सीपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सोमबार ऐतिहासिक सहमति जुटेको छ । संविधान निर्माणमा मुख्य रुपमा विवादित रहेको संघीयतामा प्रमुख राजनीतिक
भूकम्पको सबैभन्दा जोखिम उपत्यका
अखबार नेपाल काठमाडौं, जेठ २५ । भूकम्पको सबैभन्दा बढी जोखिम क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यका रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै पुराना इतिहास बोकेका पुरातात्विक वस्तु र सम्पदा भएकाले
प्रहरीमा सरुवाका लागि दौडधुप शुरु
अखबार नेपाल काठमाडौं, जेठ २५ । नेपाल प्रहरीमा राम्रो ठाँउमा सरुवाका लागि दौडधुप शुरु भएको छ । प्रहरी निरिक्षकदेखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआइजी)सम्मका प्रहरी अधिकृतहरु राम्रो ठाउँमा
२७ अतिरिक्त न्यायाधीशको कार्यकाल सकियो
अखबार नेपाल काठमाडौं, जेठ २५ । पुनरावेदन अदालतका २७ जना अतिरिक्त न्यायाधीशको कार्यकाल आजदेखि एकैसाथ सकिएको छ । पुनरावेदन अदालतमा ०७० जेठ २७ मा नियुक्त भएका अतिरिक्त
गायिका केसीको नेतृत्वमा नुवाकोटमा राहत वितरण
अखरबार नेपाल काठमाडौं, जेठ १७ । गत वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प पीडितका लागि गायिका सृजना केसीको नेतृत्वमा नुवाकोटका भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण गरिएको छ ।
मास्टरसाप, विद्यालय त भत्कियो, कसरी चलाउने होला ?
आरुघाट (गोरखा) जेठ १७ । “मास्टरसाप, तपार्इंले नै पढाउनुभएको धेरै दुःखले खडा गरेको विद्यालय आज भग्नावशेषमा परिणत भयो, विद्यार्थीका लागि बस्न योग्य छैन । गत वैशाख १२
अखबार नेपाल काठमाडौं, जेठ १७ । भूकम्पका कारण बिदा रहेका विद्यालयहरू आजदेखि सञ्चलनमा आएका छन् । गत वैशाख १२ गतेको ‘गोरखा भूकम्प’ र वैशाख १३ र
अखबार नेपाल काठमाडौं, जेठ १७ । विद्यालयलाई दिनुपर्ने जस्तापाता बजारमा बिक्री गर्न खोजेको आरोप लागेका रमेश महतले त्यस घटनाबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कुटपिट भएको
भूकम्पको नाममा जंगल बिनाश
ठाउँ ठाउँमा जंगल फडानी, काठमाडौंमै पनि जथाभावी रुख काटियो अखबार नेपाल काठमाडौं, जेठ १७ । गत बैशाख १२ गते गएको बिनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका लगातारको पराकम्पनको फाइदा उठाउँदै देशैभरिका
चार दलले पाँच दिनमा टुंगाउने
अखबार नेपाल काठमाडौं, जेठ १७ । संविधान निर्माण, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन तथा भूकम्पपीडितलाई राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका विषयमा छलफल गर्न बसेको प्रमुख चार दलको बैठकमा पाँच दिनभित्र
भूकम्प गयो, बर्खाको पीर
अखबार नेपाल काठमाडौं, वैशाख २५ । ‘बर्खा लाग्यो, भूकम्पले घर लग्यो, बस्ने ठाउँ छैन, दिनभरि त रुखको शीतलमा जीवन बाच्ला, तर रात साँझमा कहाँ जाने बढो समस्यामा
विनाशकारी भूकम्पको कारण विपत्तिको विनाश
सुवास मुखिया सुनुवार अखबार नेपाल काठमाडौं, वैशाख २५ । विनाशकारी भूकम्पको कारण मर्नेको संख्या सात हजार पाँच सय नाघेको छ भने घाइते १४ हजार नाघेको छ । बैशाख
दक्षिणको दक्षिणा, उदांगो भो प्रवृति
अखबार नेपाल काठमाडौं, वैशाख २५ । भूकम्पबाट प्रभावित गोरखा जिल्लाका पीडितहरूको उद्दार र राहतका लागि जिल्ला पुगेको भारतीय हेलिकप्टर मनलाग्दी सञ्चालन गरिएको छ । काठमाडौं कै त्रिभुवन
Pages 132 : You are at page 72 of 132